The HZ3000 Computer Monitoring System (SCADA System), China The HZ3000 Computer Monitoring System (SCADA System) Nrụpụta, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd.
>lọ>Onye na-eweta ngwaahịa>Nhazi Sistemu SCADA
Sistemụ nlekota Kọmputa HZ3000 (Sistemụ SCADA)
Sistemụ nleba anya kọmputa nke HZ3000 bụ ọgbọ ọhụrụ nke sistemụ nleba anya n'okirikiri nke na-ezute ọkọlọtọ SCADA wee jikọta nleba anya na nnweta data. Ọ na-agụnye ụzọ nleba anya atọ: nlekota ụlọ ọrụ mmepụta ihe, njikwa etiti etiti, na nlekota ọrụ igwe ojii, yana ọrụ nleba anya dị iche iche dị ka ngosi data ozugbo, nyocha ọnụ ọgụgụ, nnukwu nchekwa data, nchọpụta mmejọ, na ịdọ aka ná ntị mbụ.
Ejirila usoro nlekota kọmputa HZ3000 na ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ọkụ fotovoltaic, ebe a na-agbapụta mmiri, ọgwụgwọ mmiri mgbata, ọgwụgwọ nsị na ubi ndị ọzọ. Isi ihe bụ na: nhazi netwọk doro anya, ọrụ nchekwa dị elu; nkewa ikike doro anya, njikwa adaba; echekwabara interface, ezi scalability; ọkọlọtọ protocol, ike ndakọrịta; usoro dị iche iche, nkwado maka ikpo okwu.
Ntinye nke sistemu nlekota kọmputa HZ3000 gụnyere ụdị imewe, ụdị ịgba ọsọ na ngwungwu nwụnye nchekwa data. A na-etinye ụdị nhazi ahụ na ebe ọrụ injinia, onye ọrụ nwere ike hazie ihuenyo nhazi, nhazi nkwurịta okwu na modul ndị ọzọ. Ngwa ndị ọzọ nke ọdụ niile kwesịrị ịwụnye ụdị na-agba ọsọ iji rụọ ọrụ nchịkọta data na nlekota oru. Ekwesịrị itinye ngwungwu ngwanrọ nwụnye nchekwa data na sava nchekwa data, bụ nke na-ahụ maka ịchekwa data akụkọ ihe mere eme, ndekọ ọrụ na ozi ndị ọzọ na ọdụ.
Usoro nleba anya nke HZ3000 na-emecha ọrụ dịka mmalite na usoro nkwụsị, nlekota ahịrị, nlekota nkeji, na ntọala paramita site na nchịkọta data na nlekota oru nke na-agbaso ụkpụrụ SCADA; The centralized management nke na-saịtị automation subsystems na ozi management subsystems na-ghọtara site na mpaghara centralized akara center; Chọpụta nnukwu nchekwa data, Ngwuputa data na nyocha site na ikpo okwu ọrụ igwe ojii.
Sistemụ mkpali dabere na Microprocessor